लोकपथ संवाददाता पुस १०, २०७४ | सोमबार
नेपाली काँग्रेससहित माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम, राजपा जस्ता पार्टीहरूको समीकरणमा संयुक्त सरकार बनाउने, त्यसको प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बनाइने विषयमा तपाईँहरूले प्रस्ताब अगाडि बढाउनु भएको छ रे नि ? लोकतन्त्रको आधारभूत र विश्वब्यापी मान्यता जनअभिमतको सर्बोच्चता हो । सबैले यो अभिमतको सम्मान गर्नुपर्छ । निर्वाचन बाम गठबन्धनका नाममा एमाले–माओवादीको गठबन्धनले जितेको छ । उनीहरूकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । जनादेशको मर्मलाई सबैले कदर गर्नुपर्छ । नेपाली काँग्रेसले पाएको अभिमत प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकाका लागि हो । त्यसलाई शिरोधार्य गर्दै तदनुरुप आपूmभित्रै नीति, नेतृत्व र संरचनागत आमूल परिवर्तनका साथ हामी अघि बढ्नुपर्छ । कुनै पनि प्रकारका सत्ता गठबन्धनको खेलमा काँग्रेसले सोच्नु जनअभिमत र लोकतान्त्रिक मान्यताकै खिलाफ मात्र होइन, काँग्रेसका लागि आत्मघातीसमेत हुन्छ ।
बाम गठबन्धनमा कसलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा देख्न चाहनुहुन्छ ? यो एमाले र माओवादीको आन्तरिक मामिला हो । उहाँहरूको गठबन्धन पार्टी एकीकरणसम्म पुगोस् । आन्तरिक व्यवस्थापन उपयुक्त होस् । अहंकार र दम्भले प्रश्रय पाउनुभन्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, संविधानको भावना, आर्थिक विकास एवं समृद्धिको दिशामा देशले शान्ति र स्थायित्व प्राप्त गरोस् । यिनै मान्यताहरूमा दृढ रहेर नेपाली काँग्रेसले निरन्तर रचनात्मक दृष्टिकोणका साथ प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सुदृढीकरण, विद्यमान भारत र चीनकाबीच सम्बन्धमा सन्तुलन, उग्रराष्ट्रवादी जामालाई ब्यवहारमा कत्तिको रुपान्तरण गरिन्छ, त्यसको प्रतिक्षा र परीक्षाको घडीमा नेपाली जनता उभिएका छन् । दुई पार्टीको एकीकरण र तीब्र राजनीतिक धु्रबीकरणले केही समय अप्ठ्यारो जस्तो देखिए पनि अन्तत्तोगत्वा स्वस्थ राजनीतिक प्रतिष्पर्धा र स्थायित्वतिर देश उन्मूख हुन्छ भन्ने कुरामा म आसावादी छु । तर दुई विपरीत चिन्तन र दृष्टिकोण बोकेका पार्टीहरूबीच एकीकरण हुने कुरा अझै गम्भीर प्रतीक्षाको विषय छ ।
नयाँ सरकार गठन र राष्ट्रपतिले रोक्नुभएको अध्यादेशबारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ ? संविधानको मर्मलाई बरिष्ठ कानुनविद्हरूले पनि आ–आफ्नै ढङ्गबाट ब्याख्या गरेको पाएँ । म कानुनविद् त होइन कानुनको विद्यार्थी मात्र हूँ । मैले बुझेको संविधानको भावना र मर्म के हो भने नयाँ सरकार गठन गर्न राष्ट्रियसभाको आवश्यकता हुँदैन । तर संविधानको धारा ८८ को उपधारा ८ को प्रकृयाले पूर्णता प्राप्त गर्नु अनिवार्य हुन्छ । प्रतिनिधिसभा नै सरकार गठनकर्ता, निर्देशक र आवश्यक पर्दा विघटनकर्ता पनि हो । तर संघीय संसद , प्रतिनिधिसभाको विधिवत र औपचारिक जानकारी राष्ट्रपतिले प्राप्त गरिसके पछि यो प्रक्रिया शुरू हुन्छ । त्यस्ता कुनै कुराको प्रारम्भ नै नभई सत्तारोहणको हतार र दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति आफैमा दम्भ र अहंकारपूर्ण एवं अराजक शैली हो । लोकतन्त्र पद्धतिमात्र होइन, यो प्रक्रिया र प्रवृत्ति पनि हो भन्ने सबैले हेक्का राख्नु जरुरी छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रियालाई पन्छाएर नयाँ सरकार गठन हुन सक्दैन । नेपालको संविधानमा मन्त्रिपरिषदबाट पारित र प्रस्तुत अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले रोक्ने कुनै व्यवस्था छैन । यसलाई रोक्ने दुस्साहस र षड्यन्त्र गर्नु कम्युनिस्ट गठबन्धनको निरंकुश यात्राको प्रारम्भ हो कि भन्ने शंका बढेको छ । संवैधानिक राष्ट्रपतिले सरकारबाट प्रस्तुत अध्यादेशलाई स्वीकृत गर्न ढिलाई र अलमल गर्नु हुँदैन । त्यो घोर असंवैधानिक हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले राजिनामा नदिएकोबारे पनि धेरै प्रश्न उठेका छन्, के उहाँले पदबाट राजिनामा दिनु पर्दैन ? जुनदिन संसद विघटन भयो, तत्कालै प्रधानमन्त्री कामचलाउ सरकारको प्रमुखमा परिणत भइसक्नु भएको हो । उहाँ अहिले कामचलाउ नै हुनुहुन्छ । जुनदिन प्रक्रियागत रुपबाट बैधानिक सरकार गठन हुन्छ, त्यसै दिन उहाँको पदावधि समाप्त हुन्छ । तसर्थ राजिनामा दिनु वा नदिनुमा खासै अन्तर छैन । तर आपूmले संसदीय निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिइसकेपछि पदबाट राजिनामा दिएको भए अझ स्वस्थ परम्परा स्थापित हुन्थ्यो । तपाईँहरूजस्ता केही शीर्षस्थ नेताहरू राष्ट्रियसभामा आउने चर्चा पनि छ नि ? यो निरर्थक हल्ला हो । मलाई थाहा छैन । जनअभिमतमा पराजित भइसकेपछि फेरी संसदको सदस्य बन्नु मेरो दृष्टिकोणमा सर्वथा अनैतिक र अनुचित हो । मलाई त्यतातिर कुनै अभिरुचि र सरोकार छैन ।
तपाईँहरूको पार्टीले केन्द्रीय संसद र प्रदेशसभाकालागि समानुपातिक सूची कहिलेसम्ममा तयार गरिसक्छ ? प्रक्रियागत रुपले निर्वाचन आयोगको गतिविधिसँग यो प्रश्न जोडिएको छ । संसदीय समितिको मिटिङ् बस्ला, केन्द्रीय कार्यसमितिको मिटिङ बोलाइएला, तब नै यसबारे निर्णय हुन्छ । वर्तमान चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा पार्टीले यतातिर गम्भीर भएर सोच्नु अनिवार्य छ । समानुपातिक सूचि बुझाउँदा संसदीय समितिमा छलफलसमेत भएन । पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिबाट पारित हुने त कुरै रहेन । कसैलाई पुरस्कार दिन र मेरो वा तेरो मान्छे भन्नुभन्दा पनि अहिलेको जटिल चुनौतीलाई सामना गर्नसक्ने व्यक्तिहरूको चयन हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । एकै व्यक्तिलाई दोहो¥याई तेह¥याई समानुपातिकबाट पुरस्कृत गर्ने प्रवृत्तिको म घोर विरोधी छु । यो केन्दीय कार्य समितिबाट निर्णय भइसकेको विषय पनि हो । पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक अहिलेसम्म किन नबोलाइएको हो ? चुनाबको समीक्षा गर्न तत्काल कार्यसमितिको बैठक बोलाइहाल्नु पथ्र्यो । अझै किन बोलाइएन, म पनिभन्न सक्दिन । तत्काल बैठक बोलाएर निर्वाचन परिणामबारे गम्भीर छलफल र समीक्षा हुनुपर्छ भन्ने मेरो दृढ धारणा छ ।
कांग्रेस महासमिति बैठक : विधान संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी
काठमाडौं । काठमाडौमा जारी नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा सोमबार विधान संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने तय...
पुस २, २०७५ | सोमबार
काठमाडौं । कांग्रेस महासमिति बैठक अन्तर्गत जारी बन्दसत्रमा तनाव भएको छ । महासमिति बैठकमा सहभागि जिल्ला ...
सांसद रेशम चौधरीसहित २६ जनाको मुद्दा सुनुवाइ स्थगित
काठमाडौं । रेशम चौधरीसहित २६ जनालाई विपक्षीको मुद्दाको आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ स्थगित भएको छ ।&nbs...
नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा नेतृत्वको चर्काे आलोचना
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी समितिको बैठकमा नेताहरुले नेतृत्वको चर्काे आलोचना ग...
काठमाडौं । ‘गौरवमय इतिहास, जिम्मेवार वर्तमान, उज्यालो भविष्य’ नाराका साथ शुरु भएको नेपाली...
निर्मला बलात्कारपछि हत्या प्रकरण: प्रहरीले बुझायो सात सय पृष्ठको प्रतिवेदन